Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » UKhenketho lwaseJamaica kunye neGrupo Pinero: IiNtetho eziKhethekileyo zoTyalo-mali loKhenketho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica kunye nabaphathi beGrupo Pinero
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, oHloniphekileyo. U-Edmund Bartlett (obonwe embindini kwifoto) uyema kwifoto kunye nabaphathi beGrupo Piñero: I-CEO, u-Encarna Piñero (ngasekhohlo); kunye noSekela Mongameli, uMgangatho kunye noTshintsho, uLydia Piñero.
Lo msitho wawuyintlanganiso ekhethekileyo phakathi koMphathiswa uBartlett, amagosa aphezulu asuka kwiSebe lezoKhenketho kunye namaqumrhu alo oluntu, kunye neqela elilawulayo leGrupo Pinero.
UGrupo Pinero ungumnikazi weBahia Principe Runaway Bay, eyona hotele inkulu eJamaica enamagumbi angama-1,375.
Unozakuzaku waseSpain eJamaica, oBekekileyo u-Diego Bermejo Romero de Terreros, naye wayekho.
UGrupo Pinero ungumnini kwaye usebenza ngeendawo zokuchithela iiholide ezingama-27 kwihlabathi liphela ezinamagumbi angaphezu kwe-14,000. Inkampani i intengiso kwiJamaica, kusenziwa izicwangciso zokwandisa.
ICandelo loNxibelelwano loShishino
Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho
Ngama-64 iKnutsford Boulevard
UMlawuli oMkhulu, kuNxibelelwano loShishino
Umnxeba: 920-4926-30, ext.: 5990
Iseli: (876) 505-6118